747-8 Auto Spearers oo ku saabsan soo degitaanka
747-8 Auto Spearers oo ku saabsan soo degitaanka 1 sano 6 bilood ka hor #1312
Ugu horreyntii, aad ayaan ugu faraxsanahay qaababka weyn.
747-8, iyo noocyo kale oo 747 ah oo aan ka soo dejistay halkan, wadayaasha baabuurta iskaa uma saaraan degitaanka. Markii aan ku garaacdo wareejinta + / gacanta wax goosad ah oo ku saabsan wareega quater-ka ayaa u dhaqaaqda sidii caadiga ahayd FSX 747-400, oo umuuqda inay soo jeedinayso inay hubaysan tahay, laakiin kama hawl gasho soo degista. Kaliya waxay u muuqataa inay la shaqeyneyso 747-400 ee caadiga ah. Waxkastoo kala duwanaansho ah, xitaa iyadoo la adeegsanayo 747-400 oo leh natiijooyin kala jaad ah oo kala duwan ayaa ah in aan la geynin baabur-wadayaasha baabuurta.
Tani ma ah arrin caadi ah mise waan sameynayaa wax qaldan?
Haddii ay tahay arrin, miyay tahay wax si sahlan loo xallin karo marka aan dhammaado?
Hase yeeshee, ma ahan riwaayad weyn iyo haddii xaaladda ugu xumayd ay tahay in aan si khasab ah iigu dhiibo kuwa garaacaya gacanta marka aan dego waxaan qabaa inaan noolaan doono.
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray mikeyjames.
747-8 Auto Spearers oo ku saabsan soo degitaanka 1 sano 5 bilood ka hor #1349
Maxay tahay xawaarahaaga tooska ah markaad degto? fikrad kasta? Waan ogahay mararka qaarkood ma geyn doonaan haddii ay tahay mid aad u jilicsan ... ama waa la ii sheegayaa. Marnaba arrintaan ma heysto ....
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.266